Faah-faahinno Ka Soo Baxaya Ugu Yaraan 40 Qof Oo Ku Dhintay Dagaal Dhex Maray Soomaali Iyo Orommo Ee Waqooyiga Magaalada Jig-jiga
Thursday June 14, 2018 - 11:47:15 in Wararka by Abdi A.
Jig-jiga-(Caalami-News)-Dagaalka ayaa u dhaxeeya laba jufo oo ka soo kala jeeda Soomaalida iyo Orommada, kuwaasoo uu iska hor imaad ku dhex maray meel aan ka fogeyn Tullada Guuleed oo qiyaastii 50 – 60 KM waqooyiga kaga beegan magaalada jigjiga
Jig-jiga-(Caalami-News)-Dagaalka ayaa u dhaxeeya laba jufo oo ka soo kala jeeda Soomaalida iyo Orommada, kuwaasoo uu iska hor imaad ku dhex maray meel aan ka fogeyn Tullada Guuleed oo qiyaastii 50 – 60 KM waqooyiga kaga beegan magaalada jigjiga.
Deegaankaas ayaa xad la leh dhulka buuraleyda ah ee Harar, gaar ahaan degmada Jiracsaney ee ay Orommadu degto.
Wararku waxay sheegayaan in ugu yaraan 40 qof oo labada dhinac ka kala tirsan ay ku dhinteen seddexdii usbuuc ee u dambaysay oo dagaalladu ay dib u soo cusboonaadeen.
Dadka deegaanka ayaa sheegaya in bilihii u dambeeyey ay deegaankaas ku sugnaayeen milateriga dawladda Itoobiya, balse ay dagaalladu soconayeen, kuwaasoo sii xoogaystay dhowrkii maalmood ee u dambeeyey.
Warar ayaa sheegaya in ay jiraan dad ka qaxay tuulooyin u dhow halka lagu dagaallamay, ayadoo dadka dagaalladaas ku dhaawacmayna loo kala qaaday Tulli Guuleed iyo Jiracsaney.
Weli labada maamul ee Soomaalida iyo Orommada, iyo dawladda Federaalka ee Itoobiya kama aysan hadlin dagaalladaas.
Inkastoo ay labada jufo dagaallami jireen tan iyo 1980-meeyadii, misna dadka la socda arrimaha ku saabsan khilaafka u dhaxeeya Soomaalida iyo Orommada waxay sheegayaan in uu markan salka ku hayo xiisadda guud ee u dhaxaysa labadaas qabiil.